Ap oo uu xaalku ku xunyahay, jaaniska Solberg ay xukunka kusii heyn doonto oo kor u kacay - NorSom News
Home Politikk/siyaasad Ap oo uu xaalku ku xunyahay, jaaniska Solberg ay xukunka kusii heyn...
Ap oo uu xaalku ku xunyahay, jaaniska Solberg ay xukunka kusii heyn doonto oo kor u kacay
Xisbiga Ap oo ah xisbiga ugu weyn, isla markaana ah xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyn dalkan Norway ayaa waxaa ku yimid hoos u dhac baaxad leh oo dhanka codbixinada lagu qaaday qaabka online-ka ah. Hoos u dhaca Ap waxay farxad u tahay Erna Solberg oo markii ugu horeysay u muuqato mid heshay jaanis cusub oo ay xukunka afar sano kusii heysan karto.
Codbixin online ah oo lagu qaaday tv-ga qaranka Norway ee NRK ayaa lagu ogaadyay in xisbiyada midigta ee hada talada haya ay heystaan taageerada ugu badan, maalin kadib marka ay dhacday doodii ugu horeysay ee xisbiyada tooska ah. Codbixino kale oo la qaaday ayaa lagu ogaaday in Ap ay lagama maarmaan ku noqon doonto inay la shaqeeyaan Rødt iyo MDG, si ay kursiga ula wareegaan.
Sadex isbuuc ayaa ka harsan doorashada baarlamaanka dalkan Norway, walina lama saadaalin karo natiijada doorashada. Laakiin hoos u dhaca Ap, waxey soo nooleyneysaa rajada soo noqoshada xisbiyada hada talada hayo.
Xisbiga KRF ayaa u muuqdo inuu yahay jokerka doorashadan, iyada oo dhanka ay raacaan ay u badantahay inay la wareegaan ama ay sii heystaan talada Norway Afarta sano ee soo socoto.
Previous articleHN: Liibaan oo diiday inuu ku biiro koox ka dhisan dalka dibadiisa.
Next articleNamdal: Booliska oo raba in iyada oo aan xiligeedii la gaarin laga umuliyo hooyo soomaali oo xabsiga ku xiran
Keydka NorSom Velg måned mars 2021 (2) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)